Moet & Chandon Grand Vintage Blanc 2012 ~ ICT.com.mm
HomeMoet & Chandon Grand Vintage Blanc 2012
Moet & Chandon Grand Vintage Blanc 2012
Moët & Chandon Grand Vintage Blanc Chardonnay: 41% Pinot Noir: 33% Pinot Meunier: 26% Alcohol: 12.5% Brut/2012 Espernay, Champagne/ France ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Grand Vintage Blanc (2012) ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့... [Learn more]
Brand: MOET & CHANDONFilter by: Fine Wine Myanmar, Wine
Pinot Meunier: 26%
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Grand Vintage Blanc (2012) ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ် (33%) ၊ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး အဖြူရောင် ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ် (41%) ၊ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ် (26%) တို့ဖြင့် ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂.၅% ရှိတဲ့ Brut/2012 (Sparkling – Complex and Traditional) ရှန်ပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာနဲ့အထူးလိုက်ဖက်တဲ့ ရှန်ပိန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပင်လယ်စာကမာ၊ ငါးကြီးငါးဥဆားနယ်၊ ဆော်လမွန်ငါးကင်၊ ပုစွန်တုပ်၊ ငါးအစိမ်းဟင်းလျာတွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Bright, pale yellow with highlights of green, fine and persistent bubbles. Aroma of fresh pear, white peach, nectarine with hints of white flowers and sweet pastries. Fresh, crisp with hint of grapefruit on the palate with iodize and tangy finish.